छायामा परिएला नि ? – Nepal
पूजा शर्मा अभिनीत चार फिल्म लगातार फ्लप भए, थ्री लभर्स, मधुमास, अझै पनि र चंखे–शंखे–पंखे । करिअरको सुरुआतमै यति विघ्न ठक्कर खाँदासमेत पूजाले हरेस खाइनन् । हिट फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहिन् । त्यही चाह पूरा गरिदियो, प्रेमगीतले । ‘ फ्यान फलोइङ’ ह्वात्तै बढ्यो । म यस्तो गीत गाउँछुले त्यो क्रेजलाई अझ दरिलो बनायो । दुवै फिल्ममा पूजा नै केन्द्रीय भूमिकामा थिइन् तर नयाँ फिल्म रामकहानीमा छायामा पर्ने छाँटकाँट देखिएको छ । सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्ममा केदार घिमिरे, जितु नेपाल, विल्सनविक्रम राईजस्ता हास्य कलाकार छन् । केदारलाई त १० लाख रुपियाँमा अनुबन्ध गरिएको हो । रवीन्द्र झा पनि छन् । पुरुष कलाकारको यही वर्चस्व पूजाका लागि अप्रिय हुने त होइन ? रामकहानीमा उनको अभिनय मात्र होइन, लगानी पनि जो छ ।